मनोरञ्जन « Kakharaa
बलिउडमा डेब्यु गर्दै सचिन तेन्डुलकरकी छोरी सारा
एजेन्सी । भारतिय क्रिकेटर सचिन तेन्डुलकरकी छोरी सारा बलिउडमा डेब्यु गर्ने भएकी छन् । भारतिय स्टारका छोराछोरीहरू धमाधम फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा सारा पनि फिल्मी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने तयारी
यसपटक सगरमाथा हेरेर मात्र फर्किन्छु : सोहेल खान
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सोहेल खानले ‘दबङ रिलोडेड टुर’को बेला सगरमाथा हेरेर मात्र फर्कने बताएका छन् । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको आउँदो जेठ १४ गते दशरथ रंगशालामा हुने ‘दबङ रिलोडेड
सिने पत्रकार पराजुलीको पुस्तक ‘क्लोज अप’ सार्वजनिक
काठमाडौं । सिने पत्रकार एवं लेखक जीवन पराजुलीको पुस्तक ‘क्लोज अप’ सार्वजनिक भएको छ । नेपाली सिने जगत र चलचित्र उद्योगको विकास गर्न योगदान दिने ६१ पात्रका कथा र उनीहरुको
अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा विरुद्ध प्रकाउ पूर्जी जारी
काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेशको मुरादावाद स्थित एक अदालतले अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा विरुद्ध वारेन्ट जारी गरेको छ । सोनाक्षी विरुद्ध फेब्रुअरी २०१९ मा एक इभेन्ट कम्पनीबाट पैसा लिएर कार्यक्रममा नआएको भन्दै
पलले भने- ‘मैरै व्यवसायिक प्रतिस्पर्धीले समीक्षालाई उकासे’
काठमाडौं । नायक पल शाहले गायिका समीक्षा अधिकारीलाई आफ्ना पुरुष सहकर्मी (व्यवसायिक प्रतिस्पर्धी)ले उकास्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । फरक प्रसङ्ग तथा चलचित्रमा अभिनय गर्ने भन्ने क्रममा रेकर्ड गरिएका
रामकृष्ण ढकालको स्वरमा ‘ए पहरी फूल’ सार्वजनिक
काठमाडौं । रामकृष्ण ढकालको स्वरमा ‘ए पहरी फूल’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा राजु सिंहको सङ्गीत र गिता गिरी शेरचन को शब्द रचना छ । प्रेमभाव रहेका गीतको
डा. ढकालको ‘भोजपुरको वाङ्मय’ विमोचन
काठमाडौं । वाङ्मय समावेशी अनुसन्धानमा आधारित डा. विप्लव ढकालको वृहत ग्रन्थ ‘भोजपुरको वाङ्मय पुस्तक’ विमोचन भएको छ । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच वाङ्मय पुस्तक विमोचन भएको हो । वाङ्मय
पल र पूजा अभिनित ‘किन शंका गर्छाै’ सार्वजनिक
काठमाडौं । नायक पल शाह र नायिका पूजा शर्मा अभिनित नयाँ म्यूजिक भिडियो ‘किन शंका गर्छौ’ सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार शिव दर्शन फिल्म्सले म्यूजिक भिडियो युट्युबमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो
प्य्राङ्कस्टर आकाश सेढाईं पक्राउ, सात दिन हिरासतमै राखिने
काठमाडौं । ख्यालठट्टाको नाममा सर्वसाधरण व्यक्तिहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक हैरानी दिएको अभियोगमा प्य्राङ्कस्टा आकाश सेढाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । झापा विर्तामोड नगरपालिका–४ आदर्शटोल घर भई हाल भक्तपुर कौशलटार बस्ने
नम्रता र दयाहाङको मुख्य भूमिका रहेको सर्ट फिल्म ‘वरदान’ रिलिज
काठमाडौं । नम्रता श्रेष्ठ र दयाहाङ राईको मुख्य भूमिका रहेको सर्ट फिल्म ‘वरदान’ रिलिज भएको छ । दीपेन्द्र लामाको लेखन तथा निर्देशन फिल्म वरदान गज्जब टिभी युट्युब च्यानलबाट बिहीबार रिलिज
एकै परिवारका तीन जनाको चुनावी भिडन्त,पार्टी भने फरक-फरक
पुरुषोत्तम रिजाल विदुर । स्थानीय तह निर्वाचनमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–८ मा एकै परिवारका तीन सदस्यबीच प्रतिस्पर्धा
विदुरको पाँचवर्षीय उपलब्धि : छाडा कुकुरको बन्ध्याकरण, २९ किलाेमिटर सडक पिच
विदुर । नुवाकोटको सदरमुकामसमेत रहेको विदुर नगरपालिकाको कार्यालयले पाँच वर्षीय उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
नुवाकोटमा २ लाख २१ हजार बढी मतदाता, महिलाभन्दा पुरुष बढी
विदुर । स्थानीय तह निर्वाचनको लागि नुवाकोटमा २ लाखभन्दा बढी मतदाता छन् । वैशाख ३०
All Rights Reserved. ©2022 Kakharaa